Wanta filatame hammamtessa ykn sochoosa.
Argama wanta filatamee kan fuula irraa ifteessi.
Yabbina wanta filatameef galchi.
Hojjaa wanta filatameef galchi.
Qaabxi bu'uura tarsaa keessa cuqaasi, itti aansuudhaan bal'ina fi dheerina hammamtaa wanta haaraa filatameef sanduuqotaYabbina fi Dheerina keessatti cuqaasi.
Jijjiiramoota gara qubannootti ykn hammamtaa wanta filatamee dhorka.
yabbina barruutti taasisa
Yoo wantichi barruu gaditti xiqqaate, yabbina wantaa gara yabbina barruutti diddiriirsa.
Dheerina barruutti taasisa
Yoo wantichi barruu gaditti xiqqaate, dheerina wantaa gara yabbina barruutti diddiriirsa.